တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၁၆)
Posted by မေဓာဝီ at 6:20 AM
ဒီနေ့အဖို့ မမေတယောက် စကားလမ်းကြောင်းကြီးပဲ ချော်နေတော့တာကိုး...:P
Sincerely Mai said...
Can I put your link on my blog as my friend! I really want to,,, if so, please kindly reply me.
ညှိုးယော်ကာတည်၊ မရွှင်နှလုံး၊ အမုန်းနွံကြား၊ ခွန်အားနတ္ထိ၊ ကပ်ငြိဗျာပါ၊ သောကဖြာလဲ၊ ငါ စွဲ သွေဖယ်၊ နေကွယ် သော်ငြား၊ အားမာန် ယှက်သန်း၊ ခက်ကြမ်းထန်စေ့၊ ဆက်လှမ်းလျှောက်မည်၊ ဒီလမ်းဆီ…၊ မျက်တမ်း ပိုလင့် မပိုလင့်။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက ရေးကြည့်ချင်နေတာ နေ့လည်က အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ တွေးမိလာတာလေး ချရေးကြည့်တယ် မမေ။ ရတု စပ်နည်းအတိုင်း အတိအကျတော့ တူပါ့မလားမသိဘူး။
Ke8love >> Yes you can put my link. thanks alot.
ကိုသံလွင် ... သိပ်မတူပေမဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ... ကျမသဘောအရဆို နည်းနည်းတော့ ပြင်ချင်သား ... ဒါပေမဲ့ မပြင်တော့ပါဘူးလေ ...
7/13/2007 2:45 PM